အခမဲ့ Ebook: သင်သည်နံပါတ်များဂိမ်းကိုကစားနေသလား။ | Martech Zone
ကြာသပတေးနေ့၊ ဖေဖော်ဝါရီလ 6, 2014 တနင်္ဂနွေ, အောက်တိုဘာလ 4, 2015 Douglas Karr
ငါတို့နဲ့အတူဘယ်လောက်အထင်ကြီးလေးစားတယ်ဆိုတာရေးခဲ့တယ် လူတိုင်း သင်၏ ၀ န်ထမ်းများအားသင်၏အမှတ်တံဆိပ်အားလူမှုရေးအရမြှင့်တင်ရန်အားပေးခြင်း။ ထိုရာထူးကိုလုပ်ပြီးနောက်တွင်ထိုအဖွဲ့သည်ကျွန်ုပ်၏လူမှုမီဒီယာနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်၏အတွေ့အကြုံနှင့် ပတ်သက်၍ မေးမြန်းခဲ့သည်။ သူတို့ကထိုအင်တာဗျူး၏ရလဒ်များကိုယူ။ တီထွင်ထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့သည် သင်သည်သူတို့၏ site မှ download လုပ်နိုင်သည့်လှပသော ebook.
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော့်ကော်ဖီဟာအဖုံးပေါ်မှာရှိနေလို့ပါ။ ) …သူတို့ဟာကျွန်တော့်အသံကိုဖမ်းယူပြီးဆွေးနွေးချက်ကိုကျွန်တော့်ရဲ့တုန့်ပြန်မှုဖြင့်အကန့်အသတ်ရှိတဲ့စာရင်းထဲကို format လုပ်ဖို့အလွန်ကြီးစွာသောအလုပ်လုပ်ခဲ့တယ်။ ငါဒီမေးခွန်းတွေကိုဖြေပါတယ်
blogging သည်ပြောင်းလဲသွားပြီလား။ ၎င်းသည်ခြုံငုံသောမဟာဗျူဟာနှင့်မည်သို့ကိုက်ညီသနည်း။
၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူတစ် ဦး သည်အသွားအလာနှင့်ကြိုက်နှစ်သက်သောအရာများနှင့်ပတ်သက်သောစကားဝိုင်းများကိုမည်သို့အာရုံစိုက်သနည်း။
ဒီ ebook ဟာမတ်လနှောင်းပိုင်းမှာ Social Media Marketing World မှာငါပြောမဲ့အကြောင်းအရာကိုကောင်းကောင်းမြင်နိုင်သည်။ ဆိုရှယ်မီဒီယာနှင့်ပတ်သက်သောဆိုဒ်များ၊ ကျွမ်းကျင်သူများနှင့်ပလက်ဖောင်းများစွာသည်ဝယ်ယူရေးကိုသာအဓိကထားသည်ဟုကျွန်ုပ်အခိုင်အမာယုံကြည်သည်။ လူမှုမီဒီယာ၏မယုံနိုင်လောက်သောအခွင့်အလမ်းသည်ဝယ်ယူမှုမဟုတ်ပါ၊ ကုမ္ပဏီများသည်၎င်းတို့၏လက်ရှိဖောက်သည်များနှင့်နားထောင်ရန်နှင့်တည်ဆောက်ရန်အခွင့်အလမ်းရှိသည်။
ဤ ebook သည်ဖတ်ရလွယ်ကူပြီးမည်သည့်နည်းပညာလည်ပတ်မှုသို့မဟုတ်သင့်အားကူညီမည့်မည်သည့်ဖြေရှင်းချက်များသို့မဟုတ်ပေါင်းစည်းမှုကိုမဆိုပြသလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်၏ထင်မြင်ချက်များကိုကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များနှင့်နှစ်ပေါင်းများစွာလုပ်ကိုင်ခဲ့သည့် နှစ်မှစ၍ ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေရန်အတွက်လမ်းညွှန်တစ်ခုသာဖြစ်သည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် လူတိုင်း အဲဒီမှာဒီထွက်ရရန်အခွင့်အလမ်းများအတွက်! သူတို့ကဒီ ebooks တွေကိုစီးရီးမှာရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်တော်တော်များများဆီကထုတ်နေတယ် - စန္ဒီကာတာ၊ အမီနီတန်နက်ဆင်၊ ဂျေဆန်ရေတံခွန်၊ ခရစ်ဘရန်ဂန်၊ ဂျိုးပိုဇီဇီ၊
ယခုစာအုပ်ကို Download လုပ်ပါ။
Tags: မေီ Tennisonခရစ် Brogandouglas karrebookလူမှုရေးလူတိုင်းJason ကျသွားတယ်ဂျိုး PulizziMari အဘိဓါန် Smith ကစန္ဒီ Carter က